ဒူဒူကြီး: "Non-ballast Ship"
သဘေ်ာထဲမှာ ရေဖြည့်သွင်းပြီး၊ သွားလာခုတ်မာင်းခြင်းကို 'water ballast' လို့ခေါါပါတယ်။ သဘေ်ာသွားလာခုတ်မောင်းမှုကြောင့် ပေါါပေါက်လာတဲ့ lateral forces ကို၊ resist အနေနဲ့ ခုခံနိုင်မယ့် movement ရရှိလာစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်နှုံး excessively in high winds အကြား၊ သွားလာခုတ်မောင်းနေစဉ်၊ insufficiently ballasted အနေနဲ့ လုံလောက်စွာ ရေဖြည့်သွင်းထားခြင်း မရှိတဲ့အခါ၊ tend to tip တနည်းအားဖြင့် ‘heel’ ဆိုတဲ့ တိမ်းစောင်းမှု ပေါါပေါက်နိုင်ပြီး၊ heel ပမာဏများရာမှ၊ သဘေ်ာတိမ်းမှောက်မှု ‘capsizing’ ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
ကုန်မပါပဲ without cargo voyage အဖြစ်သွားလာတဲ့အခါ၊ သဘေ်ာကို upright အနေနဲ့ တည့်မတ်စွာ၊ ရှိနေစေရန်၊ ရေအနည်းငယ်ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ ballast အနေအထားဖြင့်၊ ခုတ်မောင်းကြပြီး၊ ကုန်တင်တဲ့အခါမှာတော့ de-ballast အဖြစ်၊ ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ရေတွေကို၊ ပြန်လည်စွန့်ထုတ်ပါတယ်။
Fig. One of the functions ofayacht's keel is to provide ballast
အစောပိုင်းကာလ ရွက်သဘေ်ာ ဆိုတဲ့ sailboats တွေမှာ၊ lateral forces ကို၊ ဆန့်ကျင်ပြီးရွှေ့လျှားစေနိုင်ရန် 'live ballast' အဖြစ်၊ လေတိုက်ရာဖက်မှာ သဘေ်ာသားတွေထိုင်ကာ၊ ထိန်းညှိရင်း heeling moment ကို၊ ရယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှတဆင့် high density material တွေဖြစ်တဲ့ concrete, iron နဲ့ lead တို့ကို၊ သဘေ်ာရဲ့ keel မှာတတ်ဆင်ပြီး၊ heeling moment ကို ထိမ်းကျောင်းခဲ့ကြသလို၊ hull မှာ ကျောက်တုန်းတွေနဲ့ သဲတွေထည့်ပြီး၊ traditional ballast အဖြစ်၊ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
(၁၈၈၀) ခုနှစ် ကာလတွေအထိ၊ ကျောက်တုန်းတွေနဲ့ သဲတွေကို၊ cargo hold တွေအတွင်းမှာ၊ ထည့်ကာ solid ballast materials အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြ တာကို၊ heavy ballast လို့ ခေါါပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ သံကိုယ်ထည် steel-hulled vessels သဘေ်ာတွေ တည်ဆောက်လာနိုင်သလို၊ pumping technology နည်းပညာတွေလည်း၊ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ၊ solid ballast materials အစား၊ "ရေ" ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် water ballast နည်းလမ်းကို၊ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်။
"ရေ" ဟာ ‘အလေးချိန်’ နဲ့ အချိုးကျကိုက်ညီတဲ့ ‘ထုထည’် weight to volume ratio ရှိပြီး၊ အသွင်းအထုတ် pump in/ pump out ကို အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်၊ သဘေ်ာရဲ့ hull မှာ သီးခြား separate tanks တွေထည့်သွင်းပြီး၊ water ballast tanks အဖြစ်အသုံးပြုကြသလို၊ cargo tank တွေကိုလည်း၊ ရေဖြည့်သွင်းကာ၊ water ballast tanks အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။
ballast tanks တွေရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ အရည်အတွက်ဟာ၊ သဘေ်ာအမျိုးအစား type နဲ့ ပုံသဏ္ဍန် design ပေါါမူတည်ပြီး၊ ကွာခြားသလို၊ တတ်ဆင် ထားတဲ့ အနေအထား position ဟာလည်း၊ hull stresses ကို၊ minimize အနေနဲ့ လျှော့ချပေးနိုင်ရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။ stability ရရှိစေရန်၊ သဘေ်ာရဲ့ အောက်ခြေမှာ double bottom ballast tanks တွေကို၊ run the length of the vessel အနေနဲ့ တောက်လျှောက်တတ်ဆင်ပြီး၊ hull girder တွေဖြင့် ပိုင်းခြားကာ၊ တည်ဆောက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ballast capabilities နဲ့ capacities ဆိုတဲ့ တင်ဆောင်ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ ရေထုထည် ပမာဏဟာ၊ သဘေ်ာ dead weight tonnage ရဲ့ (25 ~ 30 %) ခန့်ရှိပါတယ်။
သဘေ်ာတွေဟာ တနေရာမှတနေရာသို့၊ သွားလာခုတ်မောင်းနေကြတဲ့အတွက်၊ ballast နဲ့ de-ballast ကိုဆောင်ရွက်ရာမှာ၊ ဒေသတခုမှ ပင်လယ်ရေ များကို တင်ဆောင်လာပြီး၊ အခြားဒေသတခုမှာ စွန့်ပစ်ကြတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ballast water အဖြစ်၊ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ပင်လယ်ရေထဲမှာ aquatic species လို့ခေါါတဲ့ အဏ္ဍဝါဇီဝသက်ရှိ မျိုးစိတ်များ၊ အပင်များ၊ ပင်လယ်နေ အကောင်ငယ်များနဲ့ bacteria များပါဝင်လာပြီး၊ ballast tanks တွေအတွင်း ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ၊ အသက်ရှင်နေထိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။
Fig. Water ballasting and de-ballasting
အခြားဒေသတခုမှာ de-ballast အဖြစ်၊ ပင်လယ်ရေတွေကို၊ စွန့်ထုတ်လိုက်ရာမှာ၊ aquatic species တွေထဲမှ၊ အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော မျိုးစိတ်တွေဟာ၊ ပင်လယ်ရေနဲ့အတူ ပါဝင်သွားပြီး၊ ဒေသခံမျိုးစိတ်များအပေါ် လွှမ်းမိုးကာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟဗေဒစနစ်ဆိုတဲ့ ‘ecosystem’ ကို၊ ထိခိုက် ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း ‘IMO’ နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း ‘WHO’ တို့ဟာ၊ ‘epidemic disease bacteria’ ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ရေမှတဆင့် လျှင်မြန်စွာ ကူးစက်ပြန့်နှံစေနိုင်သော ဘက်တီးရီယားတွေကို၊ ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းတွေကို၊ ရှာဖွေလာကြပါတယ်။ IMO ရဲ့ MEPC လို့ခေါါတဲ့ ‘Marine Environment Protection Council’ မှ ‘Ballast Water Management’ ဆိုင်ရာ၊ လမ်းညွှန်ချက် guidelines တွေကိုလည်း စတင်ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
MEPC ရဲ့ Ballast Water Management ဆိုင်ရာ၊ လမ်းညွှန်ချက် guidelines တွေကိုတွေကို၊ resolution အနေနဲ့ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ၊ ‘G1’ - Guidelines for sediment reception facilities (resolution MEPC.152 (55)), ‘G2’ - Guidelines for ballast water sampling (resolution MEPC.173 (58)), ‘G3’ - Guidelines for ballast water management equivalent compliance (resolution MEPC.123 (53)), ‘G4’ - Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (resolution MEPC.127 (53)), ‘G5’ - Guidelines for ballast water reception facilities (resolution MEPC.153 (55)), ‘G6’ - Guidelines for ballast water exchange (resolution MEPC.124 (53)), ‘G7’ - Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (resolution MEPC.162(56)), ‘G8’ - Guidelines for approval of ballast water management systems (resolution MEPC.174 (58)), ‘G9’ - Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (resolution MEPC.169 (57)), ‘G10’ - Guidelines for approval and oversight of prototype ballast water treatment technology programmes (resolution MEPC.140 (54)), ‘G11’ - Guidelines for ballast water exchange design and construction standards (resolution MEPC.149 (55)), ‘G12’ - Guidelines on design and construction to facilitate sediment control on ships (resolution MEPC.150 (55)), ‘G13’ - Guidelines for additional measures regarding ballast water management including emergency situations (resolution MEPC.161 (56)), ‘G14’ - Guidelines on designation of areas for ballast water exchange (resolution MEPC.151 (55)) နဲ့ ‘G15’ - Guidelines for ballast water exchange in the Antarctic treaty area (resolution MEPC.163 (56)) ဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ်။
‘resolution MEPC.173 (58)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for ballast water sampling, ‘resolution MEPC.123’ (53) ဆိုတဲ့ Guidelines for ballast water management equivalent compliance, ‘resolution MEPC.127 (53)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans နဲ့ ‘resolution MEPC.124 (53)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for ballast water exchange တို့ဟာ၊ ‘Ship Operation Guidelines’ တွေဖြစ်ပြီး၊ သဘေ်ာနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။
‘resolution MEPC.174 (58)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for approval of ballast water management systems, ‘resolution MEPC.169 (57)’ ဆိုတဲ့ Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances နဲ့ ‘resolution MEPC.140 (54)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for approval and oversight of prototype ballast water treatment technology programmes တို့ကတော့ ‘Approval of Ballast Water Management System’ နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
‘resolution MEPC.149 (55)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for ballast water exchange design and construction standards နဲ့ ‘resolution MEPC.150 (55)’ ဆိုတဲ့ Guidelines on design and construction to facilitate sediment control on ships တို့ဟာ၊ 'Ship Design Guidelines' တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ‘resolution MEPC.162 (56)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for risk assessment under regulation A -4of the BWM Convention, ‘resolution MEPC.161 (56)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for additional measures regarding ballast water management including emergency situations, ‘resolution MEPC.151 (55)’ ဆိုတဲ့ Guidelines on designation of areas for ballast water exchange နဲ့ ‘resolution MEPC.163 (56)’ ဆိုတဲ့ Guidelines for ballast water exchange in the Antarctic treaty area တို့ကတော့၊ 'Administration Guidelines' တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Ballast Water Management
‘Ballast Water Management’ မှာ၊ အဓိကပါဝင်တဲ့ ကဏ္ဍတွေကတော့၊ ‘BWM methods’ ဆိုတဲ့ ballast water management နည်းလမ်း၊ recording procedure ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနဲ့ training and education ဆိုတဲ့ လေ့ကျင့််ပညာပေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ BWM methods ဆိုတဲ့ ballast water management နည်းလမ်းတွေကို၊ 'D1' ဆိုတဲ့ ballast water exchange method နဲ့ 'D2' ဆိုတဲ့ ballast water treatment system ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Ballast Water Exchange Method ကို၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ sequential method, flow through method နဲ့ dilution method ဆိုပြီး၊ နည်းလမ်း (၃) ခု ရှိတဲ့အနက်၊ တခုခုကို ရွေးချယ်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘sequential method’ ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ ballast water ထည့်သွင်းးမယ့် tank ဟာ၊ empty အနေနဲ့ ရေမရှိပဲခန်းခြောက်နေရမှာဖြစ်ပြီး၊ replacement ballast water ကို tank ရဲ့ 95 % volume metric ပမာဏအထိ၊ ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ‘flow through method’ ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ replacement water ကို overflow အနေနဲ့ လျှံကျစေတဲ့အထိ၊ (၃) ကြိမ်၊ ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ‘dilution method’ မှာတာ့ replacement ballast water ကို tank ရဲ့ အပေါါမှဖြည့်သွင်းပြီး၊ tank ရဲ့ အောက်ခြေမှ ရေပြန် ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့််သွင်းတဲ့ flow rate နဲ့ ပြန်ထုတ်တဲ့ flow rate တို့တူညီရမှာဖြစ်သလို၊ tank ထဲမှ ရေ level ဟာလည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ၊ tank ရဲ့ volume metric ပမာဏနဲ့ တူညီတဲ့၊ replacement ballast water ကို၊ အသွင်းအထုတ် (၃) ကြိမ်၊ ဆောာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ flow through method ကို ‘pump - through method’ လို့လည်း၊ ခေါါကြပါတယ်။
Fig. Ballast Water Management implementation schedule
Ballast Water Management implementation schedule အရ၊ 'D1' ဆိုတဲ့ Ballast Water Exchange Method ကို၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ရာ ခုနှစ် ‘year of ship built’ နဲ့ ‘ballast capacity’ ပမာဏပေါါ မူတည်ပြီး၊ အချိန်ကာလတခုအထိ ဆက်လက်အသုံးပြုခွင့် ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ 'D2' ဆိုတဲ့ Ballast Water Treatment System ကိုသာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၂) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၊ တည်ဆောက်တဲ့ သဘေ်ာတွေမှာတော့ 'D1' ဆိုတဲ့ Ballast Water Exchange Method အား၊ အသုံးပြုခွင့်မပေးတော့ပဲ Ballast Water Treatment System ကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုရန် ပြဌာန်းထားပါတယ်။
Fig. Ballast water treatment
Ballast Water Treatment System ကို၊ Mechanical/ gas - based treatment system, Physical treatment system နဲ့ Chemical treatment system ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Mechanical/ gas - based treatment system မှာ filtration, separation, hydro-clone နဲ့ carbonation နည်းလမ်းတွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Physical treatment system မှာ Thermal, Ultraviolet irradiation, Ultrasound နဲ့ Electrolysis နည်းလမ်းတွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Chemical treatment system မှာတော့ Oxidants, Biocides, De-oxygenation နဲ့ Electronically generated copper and silver နည်းလမ်းတွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Mechanical/ gas - based treatment system ဟာ primary treatment system ဖြစ်ပြီး၊ Physical treatment system နဲ့ Chemical treatment system တို့ကတော့ secondary treatment system တွေဖြစ်ပါတယ်။
ballast water treatment system ကိုတတ်ဆင်ရန်၊ administration လို့ခေါါတဲ့ flag state သို့မဟုတ် classification society သို့လျှောက်ထားတဲ့အခါ၊ Type Approval Certificate, Approved Ballast Water Management Plan, Approved ship-specific Operation and Technical manuals နဲ့ Confirmation that electronic and control of BWT system have been typed tested – issued by Admin or test lab စတဲ့၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ လိုအပ်ပါတယ်။ BWM survey ကိုဆောင်ရွက်ရာမှာ၊ Ballast water record book, Equipment manuals နဲ့ Installation specification and commissioning procedures အစရှိတဲ့၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ လိုအပ်ပါတယ်။
Ballast Water Management (BWM) Convention အရ၊ သဘော်တွေမှာ Administration ရဲ့ အသိအမှတ်ပြု Ballast Water Management Plan, Ballast Water Record Book, Ballast water exchange (Regulation D-1) သို့မဟုတ် ballast water treatment system (Regulation D-2) နဲ့ International Ballast Water Management Certificate တို့၊၊ ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
‘1997 International Maritime Organization (IMO) ballast water management Guidelines A.868 (20)’ အရ၊ ‘Ballast Water Management’ ကို အပြည့်အဝလိုက်နာပြီး၊ ဆောင်ရွက်ရာမှာ၊ ballast draft အထိ၊ ရေဖြည့်သွင်းရတဲ့အတွက်၊ additional weight အနေနဲ့ သဘေ်ာရဲ့ buoyancy ကျဆင်းသွားပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ VLCC ဆိုတဲ့ very large crude carrier ရေနံတင် သဘေ်ာကြီးတွေမှာ၊ unloaded transit condition အနေနဲ့ သွားလာခုတ်မောင်းတဲ့အခါ၊ propeller ကို fully submerged အနေနဲ့ ရေထဲမြုတ်နေစေရန် forward draft နဲ့ ချိန်ဆပြီး၊ ballast water ဖြည့်သွင်းရပါတယ်။ bottom slamming ကြောင့်ပေါါပေါက်လာမယ့် hull bending moments ကို၊ လျှောင်လွှဲနိုင်ရန် ballast water ဖြည့်သွင်းခြင်းလည်း၊ ဖြစ်ပါတယ်။
transverse stability ရရှိစေရန်၊ ရေဖြည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့် လှုပ်ရှားကပ်ခွာသွားလာနိုင်စွမ်း manoeuvrability ကျဆင်းသွားပါတယ်။ during cargo operations ဆိုတဲ့ ကုန်တင်နေစဉ်မှာလည်း၊ trim နဲ့ heel တို့ ညီမျှနေစေရန်၊ ballast water အသွင်းအထုတ်ကို၊ ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ballast နဲ့ de-ballast တို့ကို၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်၊ လောင်စာသုံးစွဲမှု fuel consumption ပမာဏလည်း၊ မြင့်တက်လာပါတယ်။
ballast water treatment system ကိုတတ်ဆင်ရာမှာ၊ ကနဦးကုန်ကျစားရိတ် initial installation coast ပမာဏကြီးမားသလို၊ နောက်ပိုင်းမှာ filters, ultraviolet irradiation, chemical biocides အစရှိတဲ့၊ sterilization equipment တွေအတွက်၊ အသုံးပြုမယ့် ကုန်ကျစားရိတ်ဟာလည်း၊ မြင့်မားပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ballast water treatment system အသုံးပြုစရာမလိုတဲ့ 'Non-ballast Ship' သဘေ်ာတွေကို၊ တည်ဆောက်ရန် စဉ်းစားလာကြပါတယ်။
Fig. Non-ballast ship
non-ballast ship သဘေ်ာရဲ့ waterline အောက်မှာ၊ သဘေ်ာဦး bow မှ ပဲ့ပိုင်း stern အထိ တောက်လျှောက်ရှည်လျှားတဲ့ trunks ကို၊ ထည့်သွင်း ထားပြီး၊ local seawater ကို constant flow ဖြင့်၊ အဆက်မပြတ် စီးဆင်းစေခြင်းဖြင့် သွားလာခုတ်မောင်းနေစဉ်၊ ပေါါပေါက်လာမယ့် ‘potential hauling’ အား၊ လျှော့ချယူပါတယ်။ non-ballast ship ဆိုတဲ့ ballast free ships သဘေ်ာတွေကို၊ ballast trunks, hull shape, CFD tools, propulsion, trim and heel နဲ့ cargo segregation ဆိုတဲ့ အဓိက features အချက်အလက်တွေကို၊ အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ballast tank တွေအစား ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ ballast trunks ဟာ longitudinal structural ballast trunks ပုံသဏ္ဍန်ရှိပြီး၊ centre tank (၁) ခု၊ intermediate tanks (၂) ခုနဲ့ side tank (၂) ခုပါဝင်ပြီး၊ side tank (၂) ခု ကတော့ cargo hold ရဲ့ ဘေးမှာ၊ ရှိနေပါတယ်။ ballast trunks အတွင်းသို့ seawater ဝင်ရောက်မယ့် intake plenum လို့ခေါါါတဲ့ positive pressure inlet chamber နဲ့ seawater ထွက်သွားမယ့် discharge plenum လို့ခေါါါတဲ့ positive pressure outlet chamber တို့ဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ bow နဲ့ stern မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ ballast trunks ဟာ swamped တနည်းအားဖြင့် overwhelm အနေနဲ့ ရေလွှမ်းနေတဲ့အတွက်၊ ship’s buoyancy ကို၊ diminish အဖြစ်လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ballast free ships သဘေ်ာတွေရဲ့ ကိုယ်ထည် hull ကို၊ V shape ပုံသဏ္ဍန်တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်၊ hull resistance ကျဆင်းသွားပြီး၊ fully loaded နဲ့ unloaded အခြေအနေတွေမှာ propeller ဟာ၊ optimizes အနေနဲ့ စွမ်းရည်တက်လာပါတယ်။ CFD tools လို့ခေါါတဲ့ Computational Fluid Dynamic နည်းလမ်းတွေကို၊ အသုံးပြုကာ၊ တွက်ချက်တည်ဆောက်လာတဲ့အတွက်၊ သဘေ်ာရဲ့ bow နဲ့ stern area တွေမှာ ပေါါပေါက်လာမယ့် pressure fields တွေကို၊ ပိုမိုလျှော့ချလာနိုင်ပါတယ်။
propulsion အနေနဲ့ twin screw optimum diameter propellers တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် longitudinal bulkheads တွေကိုသာ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်၊ longitudinal centre line တဝိုက်မှာ၊ moment equilibrium ဖြစ်ပေါါနေပြီး၊ cargo operations ဆောင်ရွက်စဉ်၊ trims ပြောင်းလဲမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင် ပါတယ်။ cargo segregation မှာ local sea water ကိုသာအသုံးပြုပြီး၊ 1 : 55 %,2: 25 % နဲ့3: 20 % သို့မဟုတ် 1 : 55 %,2: 22.5 % နဲ့3: 22.5 % ratio ဖြင့် ရေအသွင်းအထုတ် ဆောင်ရွက်နိုင် ပါတယ်။
Reference and image credit to : http://www.dnv.com/, http://www.tc.gc.ca/, ကိုအောင်ထွဋ် Ballast Water Management (BWM) - http://blog-aunghtut.blogspot.sg/, Guide for Ballast Water Exchange – ABS, http://www.nyk.com/, http://mlmlblog.wordpress.com/, http://www.marineinsight.com/,
Posted by ကိုထွန်း at 20:54
Bino 19 May 2013 at 02:30
The ballast management plan in USA, Brazil and Austri are very very strict.
I've gotaheadache when my ship entered the USA territorial water.